Fitsapana hafainganana Internet: Andramo ny fifandraisan-davitra anao - nPerf.com
Inona no atao hoe fandrefesana hafainganana nPerf ? Ahoana ny fomba fiasany ?
nPerf dia manasokajy tsara ny hatsaran'ny fifandraisana aterineto ampiasainao
Ity fitsapana hafainganana ity dia miankina amin'ny algorithm manokana ahafahanao mandrefy ny marina amin'ny fitrohana (download), mampiakatra (upload) ary ny fe-potoana (latency) ny fifandraisanao.
nPerf dia mampiasa tambanjotra mitokana izay manome fifanakalozana ampy amin'ny fifandraisana, mba ahafahana mandrefy ny bitrate.
Ny fitsapana hafainganana nPerf dia mifanaraka amin'ny fifandraisana an-tariby sy finday rehetra: ADSL, VDSL, tariby, fibre optika FTTH / FTTB, zana-bolana, wifi, wimax, cellular 2G / 3G / 4G (LTE), 5G.
Ny fitsapana hafainganana nPerf dia noforonin'ireo mpankafy telecom ahafahanao mandrefy tsara ny hafainganan'ny fifandraisanao Internet amin'ny tsindry iray monja! Oh ... ary ity fitsapana haingana ity dia tsy misy doka mihitsy! Ankafizo ... ary raha tianao dia aelezo ny hafatra :)
Manondro ny fe-potoana ilain'ireo angon-drakitra kely mba hamenoany ny diany eo amin'ny solosainao sy ny mpaninjara nPerf. Rehefa kely ny fahatarana, dia malaky ny fifandraisanao.
Manome ny habetsaky ny angon-drakitra azon'ny fitaovam-pifandraisanao raisina ao anatin'ny iray segondra avy aty amin'ny solosainan'ny nPerf . Raha ambony ny marika dia ny ambony koa ny hafainganan'ny fitaovam-pifandraisanao.
Manome ny habetsaky ny angon-drakitra azon'ny fitaovam-pifandraisanao alefa ao anatin'ny iray segondra aty amin'ny solosainan'ny nPerf . Raha ambony ny marika dia ny ambony koa ny hafainganan'ny fitaovam-pifandraisanao.